Waa calanka cusub ee hiiraan iyo shabelle state – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
calank hiiraan&shabeelaha dhexe
Saacadu markii ay isku beegtay 7 dii fiidnimo ee xalay ayaa shir aan cadi aheen waxa isku yimid ergada shirka mamul usameynta gobolada Hiiraan iyo SHabeelaha dhxe shirka oo ku bilowday jawi dagan ayaa wasaarada arima gudaha waxa ay ku soo bandhigtay magacyo ku dhow 30 iyo nuuco calama kala duwan oo gaarayay ilaa boqolaal kuwaas ooa ay soo direen bulshada Soomaaliyeed markii lagu baahiyay baraha Bulshada.
Codeyntii magacyada ayaa bilaabatay waxaana shirka daadihiniayy xoghayaha joogtada ah ee wasaarada arimaha gudaha Pro Yaxye Cali Ibraahim ilaa 11 magac oo laga soo xulay magacyadii ay bulshada soo direen ayay u codeeyay ergada kuwaas o isku raacay magaca dowlad goboleedka Hiiraan iyo Sh/dhexe inuu noqdo HirShabeelle State.
Mashxarad iyo murti ayaa wada qabsatay mar qura madasha shirka ee farjano markii la isku raacay magaca dowlad goboleedka HirShabeelle waxaa halku dhigu ahaa HirShabeelle waa hashiis.
Markale ayaa loo dhaqaaqay in ergadu u codeeyaan Calanka maamulka HirShabeelle Wasaarada Arimaha Gudaha ayaa soo bandhigtay ilaa boqolaal Calan oo kala duwan laakiin dood dheer iyo kan kan ayaa ka fiican waxa ay Ergadda Shirka isku Raaceen Calanka maamulka oo safeynaya Calaamada Qaranka, Barwaaqada labada gobo lee wabiga iyo beeraha tiirka u yihiin.
Gobolada fanka ee gobolada Hiiraan iyo SH/dhexe ayaa isla goobta ku soo bandhigay heeso midnoimada labada gobol iyo Soomaalinimada ka tarjumayay, kooxda barbaarta gaashaman oo iyagana qaarkood ergadaba ay ku jireen ayaa seefta gasha kala baxay iyagoo soo bandhigay shiribyo ka hadlayay farxada israaca labada gobol.
Xoghayaha Joogtada ah ee wasaarada arimaha gudaha iyo federaalka Pro Yaxye Cali Ibraahim ayaa tilmaamay in go’aanka ergadu uu yahay guul u soo hoyatay dhamaan Soomaaliya ayna asteeyeen magaca iyo calanka maamulka oo aas aas u aha dowlad goboleedka.
Gudiga fududeenta shirka maamul u sameynta labada gobol oo gadigood farxad meel ay isla dhigeen la’ sida in la joogo maalinkii caleema saarka ayaa Gudoomiyahoodu Ciise Samoow waxa uu ii sheegay tani ay ka dhigan tahay shirkii uu guuleeysay.
Shirka maamul u sameynta oo gabagaba joogo ayaa todobaadka Soo aadan waxa la galidoonaa xulista xildhibaanada Barlamaanka labada gobo lee dooranaya Gudoonka Barlaanka, Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku xigeenka Dowlad goboleedka HirShabeelle.
Caburin kuma heyno Odayaasha dhaqanka Gobolka Hiiraan”. – Somalia247
Tagged calank hiiraan &sh/dhexe
Ghana marks International Teachers’ Day